Iinkqubo eziFlexible kunye neeNkqubo eziDibeneyo ze-Intanethi »IYunivesithi yaseHodges
iindidi: Isikhokelo esikwi-Intanethi
Sikwinqanaba eliphambili leMfundo ekwi-Intanethi!
KwiYunivesithi yaseHodges, siyaqonda ukuba ukufunda kwihlabathi lanamhlanje lomsebenzi omninzi kunye neeshedyuli zosapho kunokwenza kubonakale kunzima ukubuyela esikolweni. Kungenxa yoko le nto siye sazihlengahlengisa ezininzi zeenkqubo zethu zekhampasi ukuze zithathwe kwi-Intanethi. Ukuba bhetyebhetye ngelixa ufezekisa isidanga sakho yeyona ndlela yokufumana impumelelo, kwaye siyayazi. Abanye abafundi abadala bahambe kule ndlela uyiqwalaselayo kwaye bayifumene impumelelo yabo kwiinkqubo zesidanga seHodges.
IZiko lesiDanga sokuQala: I-10 ye-Bachelor ye-Intanethi enokuThengiswa kwi-Intanethi kwi-Graphic Design ye-2020
Isikhokelo kwizikolo ezikwi-Intanethi: I-2020 yeekholeji ezikwi-Intanethi ezikwiFlorida
Ezona zikolo ziBalaseleyo: I-25 yee-Bachelor ze-Intanethi eziPhambili kwi-Intanethi kwiinkqubo ze-Intanethi
Iingxelo eziPhambili zeKholeji: IiNkqubo eziPhezulu ze-25 ze-Bachelor kwi-Graphic Design
Ezona zikolo ziBalaseleyo: I-2020 yeeDigri zeSoftware zoBunjineli kwi-Intanethi
Esona Sikolo saseParalegal sikwi-Intanethi: Ezona nkqubo zi-10 ziPhezulu zeParagal Degree
U kwi-Intanethi: I-2019 yezona Kholeji ze-Intanethi zifikelelekayo kwiiDigri zoMthetho
Isikhokelo sokuFikeleleka kweKholeji: Iikholeji ze-2020 eziphezulu kwi-Intanethi eFlorida
IiNkqubo eziPhezulu ze-Intanethi
Wamkelekile kwiNkqubo ye-English Grammar yesiNgesi yaseHodges, inkqubo elandelelanayo yokuqonda iipateni zegrama yesiNgesi ukusuka kwinqanaba lokuqala ukuya kwinqanaba eliphezulu lobuchule. Inkqubo yethu yokuhambahamba kwi-intanethi yenzelwe ngokukodwa abantu abadala abangathethi isiNgesi ukuba baqonde igrama kwaye bathethe isiNgesi ngokuzithemba. Fumana izakhono ozifunayo kwizibizo, izenzi, amagatya,…
Intengiso yale mihla
Funda iindlela ezifanelekileyo zokuthengisa ezikubeka phambili kukhuphiswano.
Khetha ilitye elikhulu lokunyathela kwizicwangciso zakho zangomso, nokuba yeyiphi na enokuba ikwinqanaba lezifundo eziPhakathi.
Isidanga seNkqubo kwi-Intanethi
Iinkqubo eziKhokelayo ze-Intanethi ze-Intanethi
Izibonelelo zokuya kwiiHodges U kwiDigital yakho okanye isiQinisekiso
Ngenxa yokuba siyile iindlela zethu zedigri zabafundi abakwi-Intanethi, uya kufumana izibonelelo ezingaphezulu kwezinye iiyunivesithi ezikwi-Intanethi.
Oonjingalwazi bayafumaneka ukuze baphendule imibuzo yakho. Siyinkonzo eyunivesithi epheleleyo ebonelela ngeenkqubo zesiko kunye ne-Intanethi. I-faculty yethu izenza zifumaneke kuwe ukuze uphendule imibuzo yakho kwaye zikuncede uphumelele. Kwaye, ubuchule bethu budlula iikhrayitheriya zokufundisa ezingqongqo ezifunekayo zokuvunywa kwengingqi kunye neenkqubo.
Iinkqubo zethu zesidanga zilungiswe ngokupheleleyo kubafundi abadala. Ukuba bhetyebhetye kuyo yonke inkqubo yile nto kusenza sahluke. Asisiyunivesithi enikezela ngezifundo ezikwi-Intanethi. Siyi-yunivesithi ezinikele kwimpumelelo yakho.
Awuyi kubeka emgangathweni ukulungelelanisa. Siyunivesithi eyamkelweyo engingqini. Ukuvunywa kwengingqi kungqongqo ngakumbi kwaye kufuna iziphumo zabafundi ezingaphezu kwamanqanaba okuvunywa kuzwelonke. NgoHodges U, ufumana imfundo engcono.
Oonjingalwazi bethu banamava okwenyani. Banokubonelela ngezakhono onokuzisebenzisa kwikhondo lakho lomsebenzi wangoku. Qalisa ukusebenzisa izakhono ozifundayo namhlanje.
I-Canvas liqonga le-Intanethi esilisebenzisela ukuhanjiswa kwekhosi kwi-Intanethi, ukwenza unxibelelwano koontanga kunye nenkxaso yokufundisa ifumaneke ngokulula. Umyalezo okhawulezileyo, iiyure zeofisi ezibonakalayo zabahlohli, izifundo ezirekhodiweyo, kunye namandla okwenziwa kwenkomfa yexesha lokwenyani zonke ziyafumaneka kwiYunivesithi yaseHodges yamava okufunda kwi-Intanethi.
Yenza utshintsho kwixesha elizayo oza kubulela ngalo. Qala kwi-intanethi namhlanje!
Ndikulungele ukufaka isicelo ngoku!
Iifomathi zokuNikezelwa kweDigri kunye nesiQinisekiso
KwiYunivesithi yaseHodges, uninzi lweedigri zethu zekholeji ziyafumaneka ngokupheleleyo kwi-Intanethi. Siye saqulunqa uluhlu lweenkosi, i-bachelor's, inxulumano, kunye neenkqubo zokuqinisekisa ezinokuthi zithathwe kwi-intanethi, naphi na apha kuma-49 athi sikhonza.
Ngaba Ukulungele Ukufunda Nge-Intanethi?
Ukufunda kwi-Intanethi kufuna ukuba ube nengqondo efanelekileyo kunye nokuzimisela ukubona umsebenzi ugqibe. Siyakholelwa kuwe, kwaye siyazi ukuba unayo into efunekayo ukuze ufunde kwi-Intanethi. Kodwa ngenxa yeemfuno ezininzi ngexesha lakho, kubalulekile ukuqinisekisa ukuba uyakuqonda ngokupheleleyo ukubandakanyeka kwinkqubo ye-Intanethi. Ukufunda kwi-Intanethi akukho lula, kodwa ngokuqinisekileyo kunokuba lukhetho oluphezulu ekuvumela ukuba ugqibezele iinjongo zakho zemfundo ephezulu.
Qonda ukuba kuthetha ntoni ukuba ngumfundi okwi-Intanethi. Ukuba bhetyebhetye sisitshixo ekufundeni kwi-Intanethi. Unokufunda malunga nomsebenzi kunye neeshedyuli zosapho, ngexesha onalo ngexesha lekhefu nasemva okanye nasemva komsebenzi. Mhlawumbi yeyakho, kusesekuseni okanye emva kokuba wonke umntu elele. Nokuba yeyiphi na ishedyuli yakho, kunokwenzeka ukuba uthathe iiklasi ezikwi-Intanethi. I-Synchronous, asynchronous, itekhnoloji eyandisiweyo, isimulcast, kunye nezifundo ezifundiswayo kwi-Intanethi zonke zinokubakho kwimeko yemfundo ephezulu. Kukho imiceli mngeni, nayo. Ukufunda nge-Intanethi kungathatha ixesha elininzi kunemfundo yesiNtu (umzekelo: iklasi yeyure enye enesifundo kunye nengxoxo inokujika ibe lixesha elininzi kwi-intanethi emva kokuba uyifundile le ntetho kwaye ubhale iingxoxo zakho ukuze uphonononge umhlohli). Ukuba ngokwesiqhelo ufuna ulwalathiso oluncinci oluvela kunjingalwazi, ukufunda kwi-Intanethi kunokuba nzima ngakumbi kunendawo yokufunda edibeneyo. Sinikezela ngeendlela ezininzi zokufunda; khetha leyo ikulinganayo.
Iimpawu ezenza ukuba abafundi abakwi-Intanethi baphumelele kubandakanya izakhono zonxibelelwano ezibhaliweyo ezigqwesileyo, ukubanako ukufunda nokuqonda umxholo ngokukhawuleza nangokufanelekileyo, izakhono zemathematika ezinamandla, amandla (kunye nomnqweno) wokusebenza ngokuzimeleyo ngaphandle kolawulo, kunye nokuzazi ngokwaneleyo ukubona indlela yakho yexesha elizayo ngelixa uthatha inyathelo lokuqala nyamezela ngomceli mngeni. Uya kudinga ukubanakho ukucwangcisa ixesha lokufunda kunye nokulandela isicwangciso sakho esichongiweyo kwanaxa kuvela into enokukuphazamisa. Ungakhathazeki ukuba ezinye zezi zakhono zibonakala zinzima. Abasebenzi bethu balapha ukwenza ukuba ukufunda kufikeleleke kuye wonke umntu.
Amandla okwenza unxibelelwano oluqinisekileyo nabantu abafanayo ngelixa ufunda kwi-Intanethi. Kulula kakhulu ukuphumelela xa unenkqubo yenkxaso efanelekileyo yokukunceda kwinkqubo yakho yokufunda kwi-Intanethi. Uya kuba nemiceli mngeni, kwaye nganye yazo iya kufaneleka xa ubambe isidanga sakho esandleni sakho. Ukuba nemizekelo emihle kunye nenkqubo yenkxaso enokubonelela ngako konke okudingayo ukufikelela kwinqanaba lakho lokugqibela kubalulekile kwimpumelelo yakho. Unayo le!
Yazi izizathu zakho. Izizathu zokuba uthathe isigqibo sokuya esikolweni kwi-intanethi ziya kuchaphazela amandla akho okufunda. Yazi kwaye uyiqonde inkuthazo yakho yokukhetha ukubuyela esikolweni kwaye ufunde kwi-Intanethi. Kwabaninzi, ukufunda kwi-Intanethi kuyabavumela ukuba baqhubeke nokusebenza ngelixa beqhubeka nemfundo ephezulu ukuze bafumane umvuzo. Gcina inkuthazo yakho iphambili ukuze uyikhumbule xa ukufunda kubonakala kudinisa okanye kusila. Uya kutyala imali kuwe nakwinkqubo yakho ekwi-intanethi. Ixesha lakho lolunye lotyalo mali olukhulu oza kulwenza. Umzamo owubeka kufundo lwakho lwe-Intanethi luya kulungelelana ngokuthe ngqo nendlela oqhuba ngayo kwizifundo zakho. Uyakwenza ukuzibophelela kwemali nakuwe. Ukutyala imali kwimfundo yakho kuya kukunika imbuyekezo enkulu ekugqibeleni. Siyazi ukuba ungayenza, kwaye ezantsi, nawe wenze njalo!
Iinkcukacha zokungeniswa kwabafundi kwi-Intanethi kunye neekhrayitheriya
IYunivesithi yaseHodges ayicaluli ngokobuhlanga, ibala, inkolo, isini, inkanuko yesini, imvelaphi yesizwe, ubudala, okanye ukukhubazeka ekuboneleleni ngamathuba emfundo okanye amathuba engqesho kunye nezibonelelo. Onke amalungu oluntu lwaseYunivesithi axatyiswa ngokulinganayo. IYunivesithi yaseHodges ayicaluli ngokwabelana ngesondo okanye ukukhubazeka kwiinkqubo zemfundo ezisebenzayo, ngokuhambelana neemfuno zayo yonke imithetho esebenzayo nemithetho karhulumente kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, kwiTayitile IX yeziLungiso zezeMfundo zika-1972. , Icandelo lama-504 loMthetho wokuBuyisela kwimo yesiqhelo ka-1973, kunye noMthetho waseMelika okhubazekileyo ka-1990.
Imibuzo malunga nesihloko IX, kufuneka ibhekiswe kuMququzeleli we-IX wesihloko:
UKelly Gallagher, Isihloko soMququzeleli we-IX 4501 Colonial Blvd, Fort Myers, FL 33966
Isihloko soqeqesho lwe-IX sinokufikelelwa Apha.
Imibuzo malunga nabantu baseMelika abakhubazekileyo kufuneka ibhekiswe kuMququzeleli we-ADA:
UJosh Carcopa, UMlawuli wamava aBafundi.
Imibuzo ngeposi kufuneka ithunyelwe kwiKhampasi yaseFort Myers kule dilesi ilandelayo: IYunivesithi yaseHodges, Attn: Umququzeleli weADA, 4501 Colonial Blvd, Fort Myers, FL 33966.
Iyunivesithi inelungelo lokukhanyela ukwamkelwa komenzi-sicelo xa isenzo eso sithathwa njengesona silungileyo kumenzi-sicelo okanye eyunivesithi. Iyunivesithi ayibamkeli abenzi-zicelo abanobundlobongela okanye ubundlobongela ngesondo kwiinkqubo zayo zokufunda. Abanye abafake izicelo abanerekhodi elibi banokugcwalisa iFelony Conviction Appeal Form, ephononongwa yikomitana yekomiti yezoKhuseleko yeYunivesithi. Ikomitana, isigqibo sayo sesokugqibela, iya kumisela amandla omgqatswa okuqhubela phambili kwinkqubo yolwamkelo.
Amanyathelo okufunda kwi-Intanethi eyunivesithi abekwe esweni yinkokeli yezifundo zesikolo ngasinye esweni ukuhlanganiswa kweekhosi ezikwi-Intanethi kunye neenkqubo zenkqubo yokufunda. Iikhosi ezikwi-Intanethi kunye neenkqubo zenziwa kusetyenziswa i-Canvas, inkqubo yolawulo yokufunda eyunivesithi. Abafundi abathatha iikhosi ezikwi-Intanethi bayacelwa ukuba baqhelane neqonga leCanvas ngaphambi kokuba baqale izifundo zabo.
Zonke iikhosi ezikwi-Intanethi ezifundiswa kwiYunivesithi yaseHodges zinokufuna uvavanyo lokugqibela olwenziweyo. Abafundi bayacelwa ukuba bathathe iimviwo zokugqibela (ezifuna ikhamera yewebhu) ngexesha lemihla edweliswe kwisango le-MyHUgo. Ikhosi nganye ye-Intanethi inemali ehambelana nayo (nceda ujonge kwiShedyuli yokuFundisa kunye neMirhumo kwiMiqathango neMiqathango yoBhaliso).
Ukufunda nge-Intanethi / abafundi bemfundo ekude bangaqala isikhalazo nge-imeyile ukuya onlinelearning@hodges.edu.
Kwimeko apho abafundi abakwi-Intanethi / kwimfundo yomgama baziva ukuba isikhalazo besingalawulwa kakuhle liziko, abafundi banokungenisa isikhalazo kolu lonxibelelwano lulandelayo:
a) I-ombudsman isebenza njenge zikarhulumente eziphambili Indawo yokunxibelelana yokuphendula imibuzo kunye neenkxalabo ezivela kumagosa esikolo sabucala nakwii-ofisi zeenkqubo.
b) Ukuba iOmbudsman ayinakho ukukunceda, nxibelelana neOfisi yoGunyaziso kwiSebe leMfundo.
Abafundi abafunda kwi-Intanethi / abafundela amabanga abagqibe inkqubo yezikhalazo kwiYunivesithi yaseHodges kunye nenkqubo yesikhalazo sikarhulumente esisebenzayo banokubhena kwizikhalazo ezingezizo ezokuya kwiFlorida State Authorization Reciprocity Agreement Postsecondary Reciprocal Distance Education Coordinating Council (FL-SARA PRDEC). Ngolwazi olongezelelweyo ngenkqubo yesikhalazo, nceda undwendwele Inkqubo yeZikhalazo yeFL-SARA phepha.
Le migaqo-nkqubo ilandelayo isebenza (8.1 Amalungelo omfundi noxanduva lwakhe kwaye 8.4 UMgaqo-nkqubo wezikhalazo zabafundi) zipapashwe kwiHoodges University Student Handbook enokufumaneka Apha.
Iimfuno zokuFunda kwi-Intanethi
Jonga ikhathalogu yethu yokuKhethekileyo malunga nokuFunda kwi-Intanethi
Faka isicelo namhlanje!